अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलो निर्णय २० अर्ब ऋण ! - Gaunbeshi
Posted on ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०८:२१ Author Gaunbeshi Comment(0)
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पौडेलले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखसँग उनले केहीबेर ब्रिफिङ लिएका थिए । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पौडेलले विश्व बैंकसँग ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् ।
दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अर्थ सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘यो ऋण बजेटरी सहायताअन्तर्गतको हुनेछ,’ उनले भने, ‘ऋण प्राप्त भए हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछौं ।’ जसको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०९:०७ Author Gaunbeshi
काठमाडौं, कात्तिक ५ । यसअघि सबैभन्दा धेरै आयात हुने डिजेललाई समेत उछिन्दै मोबाइल फोन नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सूचीको शीर्ष स्थानमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तीन महिनामै नेपालमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बढ्दो अनलाइन पढाइ तथा चाडपर्वको माहोलसँगै असोजसम्म १५ […]
काठमाडौं, २२ असोज । बेलायतका ६३ वर्षीय वृद्ध अनिल पटेल एक सय ४९ दिनपछि गत सोमबार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भए । उनी बेलायतमा लामो समयसम्म संक्रमित रहेर निको हुनेमध्ये एक बिरामी हुन् । कोभिड महामारी खेपिरहेको विश्वमा संक्रमणको दर र जोेखिम भने अझै जोखिमपूणर् बन्दै गएको छ । योसँगै सामान्यतः १४ दिनभित्र निको हुने भनिएको […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:५७ Author Gaunbeshi
जनकपुरधाम, २२ असोज । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रदेश-२ सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ गुणा वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु १६ करोड ४६ लाख रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा समितिहरू गरी कुल १ सय २६ […]
Posted on २५ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:११ Author Gaunbeshi
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा बन्द भयो नेपाली कागज उद्योग
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १२:२५ Author Gaunbeshi
Posted on ७ माघ २०७७, बुधबार १४:५८ Author Gaunbeshi
तिहारमा रानीपोखरी खुला गर्ने, के हुँदैछ तयारी ?
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १२:३९ Author Gaunbeshi
Posted on १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:५९ Author Gaunbeshi